တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: December 2010
နှုတ်ဆက်တယ် နှစ်ထောင့်တဆယ် …
တကယ်တော့ ခဏလေး … ။
ကွယ် … ခုတော့ …
ကြည်နူးခဲ့ဖူးပြီ … နှစ်ထောင့်တဆယ်။
ခပ်ရဲရဲ လှမ်းပါရစေ … နှစ်ထောင့်တဆယ်။
ချိုသလိုနဲ့ ခါးသက် … ဒါပေမဲ့ စွဲမက်ခဲ့တယ်။
မှိန်သလိုနဲ့ လင်းလက် … ပြိုးပြက်လှပခဲ့ရတယ်။
ခဏခဏလန့်နိုး … အိပ်စက်ခြင်းကို ခိုးခံခဲ့ရတယ်။
နှစ်ထောင့်တဆယ်ရဲ့ အရိပ်တွေ …
နှစ်ထောင့်တဆယ်ရဲ့ အဆိပ်ရည် …
နှစ်ထောင့်တဆယ်ရဲ့ အတိတ်တွေ …
ရင်ကို တိုက်စားခဲ့ …
ဒီလိုနဲ့ … တစစ
နှစ်ထောင့်ဆယ့်တစ်ကို ကြိုသူတွေကြားမှာ …
ငါ … ငိုရမလား နှစ်ထောင့်တဆယ် … ။
ကဗျာတွေဖွဲ့ … ဇာတွေမချဲ့ချင်ပေမဲ့
နေခဲ့တော့ … နှစ်ထောင့်တဆယ်။
၃၁၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
(ချစ်သော ၂၀၁၀ သို့)
Posted by မေဓာဝီ at 12:01 AM 16 comments
ပုံတွေကြည့်ရုံနဲ့တင် အအေးဓါတ်က စိမ့်လာတယ် ဆရာမ။ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုကို အဆိုးမမြင် ချစ်ခင်စရာ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ကဗျာဆန်ဆန် စာကြောင်းလေးတွေဖွဲ့ နိုင်တဲ့ အတွက် အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ ဆရာမဆီက အများကြီး အတုယူရဦးမယ်။ အရင်က ဆရာမ ဒီလောက် အကောင်းမမြင်တတ်ပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ဆရာမင်းသိင်္ခနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုရေးတာတောင် မှတ်မိနေပါတယ်။ ဘာသာတရားလိုက်စားလွန်းတော့လည်း အကောင်းမြင်စိတ်များသွားတယ်ထင်တယ်။ ဒီရက်တွေထဲ စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေများတယ်။ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ ကဗျာတွေလည်း မရေးဖြစ်ဘူး။ ဘလော့မှာကဗျာတွေလာပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းစာအုပ် အခုတလော လူနဲ့အတူတူရှိမနေတဲ့အတွက် စာလုံးပေါင်း တွေမှားရင် လာပြင်ပေးပါဦး။ နှစ်သစ်မှာ ဒီထက်မက အရာရာကို အကောင်းမြင်နိုင်ပါစေ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ အမည်မပါတဲ့ အထက်ပါကွန်မန့်လေး ၀င်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျမ အတွေးနယ်ချဲ့မိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူပြောသလိုပါပဲ ကျမက အကောင်းမြင်စိတ် နည်းပါးလွန်းခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက (ခုချိန်ထိ) နေရာတကာမှာ ဆန့်ကျင်တဲ့ စိတ်နဲ့တွေးပြီး ဝေဖန်ရေး မျက်စိနဲ့ ကြည့်ခဲ့မိတယ်။ စာသင်တဲ့အခါမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်နဲ့ စောဒက မေးခွန်းတွေ ခဏခဏ ထုတ်ခဲ့မိတော့ ဆရာ ဆရာမတွေ အပါအ၀င် လူတကာရဲ့ ငြူစူခြင်းကိုလဲ အမြဲခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို တွေးတတ် မြင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ “မကောင်းမြင်ခြင်း”လို့ မတွေးမိဘဲ “critical thinking” ဆိုပြီး ဆင်ခြေတက် မိပါသေးရဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုတော့ ခပ်ဖော့ဖော့ ဝေဖန်ရတာပေါ့လေ။
တကယ်တမ်း critical thinking က မကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့ လားလားမှ မတူဘဲ၊ ကျမဘာသာ ရောချလိုက်တာပါ။ လတ်တလော သင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းစာမှာလဲ professional scepticism ဆိုတာကို ကျမက ခပ်ထွေးထွေး နားလည်မှု လွဲခဲ့သေးတယ်။ အမြဲ သံသယစိတ်နဲ့ ကြည့်နေရမှာလား … အဲဒါဆို ဒါဟာ မကောင်းမြင်ခြင်းပဲ လို့ ကောက်ချက်ဆွဲခဲ့မိတယ်။ ဆိုလိုတာက မကောင်းမြင်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် ဝေဘန်ပိုင်းခြား စိစစ်ခြင်းလို့ ဆိုရလေမလား မသိ။
ဒီကနေ့ အဖေနဲ့ စကားပြောရင်း အဲဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်တော့ အဖေက ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သမီး … ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ါဒက ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒပဲ၊ ဉာဏ်နဲ့ ဝေဘန်ပိုင်းခြားပြီးမှ ယုံကြည်လက်ခံဖို့ ဆိုပါတော့။ နောက်ပြီး စာသင်သားတွေအတွက် အင်မတန် မှတ်သားစရာကောင်းတာ တခု ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက …
၁။ ဥဂ္ဂဟ - သင်ယူခြင်း။
၂။ ပရိပုစ္ဆာ - မရှင်းလျှင် တဖန်ပြန်မေးခြင်း။
၃။ သ၀န - နာယူခြင်း။
၄။ ဓာရဏ - မှတ်သား ဆောင်ထားခြင်း။
၅။ ပစ္စဝေက္ခဏာ - ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း တဲ့။
အဲဒီမှာ ပစ္စဝေက္ခဏာဆိုတာ ဉာဏ်နဲ့ အပြန်ပြန် အထပ်ထပ် ဆင်ခြင် သုံးသပ်တာကို ပြောတာ။ ဒါကြောင့် စာသင်ယူတဲ့နေရာမှာ မေးဖို့လဲ မတွန့်နဲ့၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လဲ မရွံ့နဲ့၊ မေးတယ်ဆိုရာမှာလဲ ကိုယ်နားမလည်လို့၊ ဒွိဟဖြစ်လို့ ရိုးသားစွာ မေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်၊ ဆရာကို ပညာစမ်းတာမျိုး ကပ်သီးကပ်သပ် အတွေးနဲ့ မေးတာမျိုးဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့”
အဖေပြောမှ … ကျမလဲ ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ ရယ်မိတယ်။ ကျမက စောဒက တက်ချင်စိတ်နဲ့ မေးချင် မြန်းချင် ဝေဖန်ချင်တာပဲ သိတယ်၊ သေချာလဲ ဉာဏ်နဲ့ မဆင်ခြင် မသုံးသပ်မိပါဘူး။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာဟာ ဉာဏ်ပါရမယ်၊ ဘာမှမသိ နားမလည်ဘဲ မဝေဖန်နိုင်ဘူး။ ဝေဖန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချီးကျူးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က အဲဒီနယ်ပယ်မှာ တကယ် ကျွမ်းကျင်မှ ချီးကျူး ဝေဖန်သင့်တယ် မဟုတ်လား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်ကို မြင်းထိန်းငတာက ချီးကျူးသလို ဖြစ်နေရင် မကောင်းဘူးလေ။
အခု ဒီကွန်မန့်လေးရလာတော့ ကျမသေချာ ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ကျမ တကယ်ပဲ အကောင်းမြင်တတ်နေပြီလား??? ။ သိပ်တော့ မထင်မိပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ မိဘဘိုးဘွား ဆွေမျိုးများရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မိရိုးဖလာလွန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်အဖြစ် ဘာသာရေးမှာ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ အနည်းအကျဉ်း သိတာကလွဲလို့ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံမှုအပိုင်းမှာ အင်မတန်မှ အားနည်းနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် ကျမ စာတွေထဲမှာ မကြာခဏ ထည့်ရေးခဲ့တဲ့ ယောနိသောမနသိကာရကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးဖို့ရာ အလွန်ခက်ခဲနေတုန်းပါပဲ။
တကယ်က အကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာ “ယောနိသော မနသိကာရ” ပဲ မဟုတ်လား။ တလောက ယောနိသောမနသိကာရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတဦးနဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်တော့ သူရှင်းပြတဲ့စကားလေး မှတ်သားစဖွယ် နာယူခဲ့ရတယ်။ ယောနိသော မနသိကာရဆိုတာ “နားလည်မှုရှိခြင်း” … တဲ့။ သူက ဥပမာလေးနဲ့ ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“မိခင်ရင်ခွင်ထဲက ကလေးဟာ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ ရှူးပေါက်ချတယ် ဆိုပါစို့ … မိခင်က စိတ်မဆိုးဘူး၊ အဲဒါကို မေတ္တာကြောင့်လို့ ယေဘုယျ မြင်တယ်၊ တကယ့်ယောနိသောက မေတ္တာဆိုတဲ့ အဒေါသ စေတသိက်နဲ့ တွဲပြီးပါလာလို့ ဖြစ်တာ၊ တနည်းအားဖြင့် မိခင်က သူ့ကလေးကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်တယ်၊ သြော် … ကလေးပဲကိုး .. ဘယ်သိပါ့မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ပေါ့၊ အဲဒီအတွေးကြောင့် မိခင်ဟာ စိတ်ဆိုးတော့ဘူး”
သူ့ရဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ရှင်းပြချက်ကို ကျမသဘောကျလို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့တော့ပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းမြင်တတ်ဖို့ … အရာရာကို သင့်တင့်စွာ နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ … လူတိုင်းအပေါ်မှာ နားလည်မှုရှိဖို့ ကျမ ကြိုးစားရပါအုံးမယ်။
၂၉၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
(ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက် အမည်မပါသော ကွန်မန့်ရှင်နှင့် ယောနိသောမနသိကာရကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးခဲ့သော ကိုမင်းထက်တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ )
Posted by မေဓာဝီ at 11:45 AM 16 comments
Labels: ကွန်မန့်များနှင့် ..., မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ, အတွေး အပိုင်းအစများ
ခရစ်စမတ်နေ့ နဲ့ boxing day (၂၆ ဒီဇင်ဘာ) မှာ မေဓာဝီတယောက် ပွဲဆက်တွေများပြီး အိမ်သိပ်မကပ်နိုင်ပါဘူး။ ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုပ်တယ် ဆိုရမလားပဲ၊ ဦးရီးတော်ကို အကြောင်းပြုပြီး ၀ါးတီးတွေ သွားနေရတာ ည ၉ နာရီကျော် ၁၀ နာရီမှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ အေးလဲအေး၊ ချမ်းလဲချမ်း၊ ပျော်လဲ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက် နှစ်ရက်ပါပဲ။
ပြာလွင်ကောင်းကင် နှင်းဖြူစင်လမ်း သစ်ပင်တန်းနှင့် ...
ခရစ်စမတ်နေ့က နေသာတယ် ... ဒါပေမဲ့ အပူချိန်က နေ့ခင်းမှာတောင် အနုတ် ၅။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကတည်းက ကျခဲ့တဲ့ နှင်းတွေ ... အပူချိန် သုညဒီဂရီအထက် မတက်တော့ နေရောင်ကို အံတုတဲ့ နှင်းထုထူထူက ခုထိဖြူလို့မဆုံးနိုင်သေး။ အဖြူရောင် ခရစ်စမတ်ကို တောင့်တသူများ အကြိုက်ပေါ့။
အဟမ်း ... လည်ချောင်းရှင်း ၀မ်းခေါင်းချဲ့ စားမယ့်ဟန်အပြင်
ကျွေးသူ စားသူ ဘယ်သူမှ ခရစ်ယာန် မဟုတ်ကြပေမဲ့ ဒီလို ပိတ်ရက်မျိုးမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဆုံကြ ... စားသောက် ပျော်ရွှင်ကြ ... တဒင်္ဂတော့ လုပ်ငန်းခွင်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကင်းဝေးလို့ပေါ့။
ချိုချို အီအီ စားကြမည်
"ချိုလွန်းလို့ မစားနိုင်ဘူးလား၊ ပါဆယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမည်၊ အစားအစာ လူနှင့်တည့်သည်။ မကြာမကြာ စားပေးပါ။" (မှတ်ချက်။ သင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာမဟုတ်ပါ။ အချိုပွဲ မုန့်တွေ အိမ်ရှင် အန်တီ ထည့်ပေးလိုက်သမျှ မေဓာဝီ အကုန် မ-လာပါတယ်)
စားသောက်ပြီးတော့ ဆော့ကြတယ်။ ကလေးတွေရော လူကြီးတွေရော ... လူမကြီးတကြီးတွေရော ... ။
ဆွဲထား ဆွဲထား ပဲမများနဲ့
ဒီလိုပါပဲ။ အပျော်ဆိုတာ ကိုယ်ရှာမှတွေ့တာမဟုတ်လား။ ပျော်အောင်ကြံဖန် နေကြရတာပေါ့။ ကလေးတွေ ပျော်နေကြတော့ ကိုယ်လဲ ပျော်ပါတယ်။ ပျော်နေတဲ့ သူတို့ပုံလေးတွေ ရိုက်လိုက်တာ အပျော်လွန်လို့ လက်တုန်ပြီး ၀ါးသွားတယ်။
နှင်းတောထဲ ထွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ ကစားကြ။ တူတူသွားတဲ့ ကလေးမလေးကို နှင်းတွေထဲ အိပ်ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ခမျာ အေးးးးလို့ ... ။ အေးတယ် အမ .. မြန်မြန်ရိုက်ပေးပါတဲ့။
သစ်ကိုင်းငုတ်တို သစ်ပင်အိုလဲ နှင်းကိုအံတု နေသလော
အရွက်တွေ ဝေစဉ်ကလဲ သိပ်လှတဲ့ သစ်ပင်ကြီး။ ခုလို အကိုင်းအဆစ်တွေ ဖြတ်ခံရပြီးနောက် နှင်းတောထဲမှာ မြင်ရတော့လဲ တမျိုးတဖုံ ကြည့်ကောင်းသလိုပဲ။
ရွှေရောင်တကန့် နှင်းတကန့်နှင့် ရှင်းသန့်စင်သည် မြတ်စေတီ
boxing day (၂၆ ဒီဇင်ဘာ) မှာ ဘာမင်ဂန်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းဟင်းသွားပို့ကြတယ်။ ဘုရားပရ၀ုဏ်ထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ မြင်ကွင်းက ထူးခြားဆန်းကျယ်လို့ ... ။
နှင်းဖြူဖုံးလွှမ်း စေတီနန်းလဲ ဆောင်းကြမ်း၏ဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံလျက် ...
ကျောင်းဝင်းတခုလုံး အဖြူရောင် လွှမ်းနေတယ်။ နှင်းဖြူတွေကြားမှာ ရွှေရောင်စေတီက ခန့်ငြားသပ္ပါယ်လို့။ စေတီနဲ့ ကျောင်းဝင်းကို ဓာတ်ပုံတွေ လှည့်ပတ်ရိုက်ပြီး ဘာမင်ဂန်က ပြန်တော့ ညနေ ၃ နာရီ ခွဲလုလု။ နောက်တနေရာ သွားရအုံးမှာမို့ ဘုန်းဘုန်းတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
တုံးလုံးပက်လက် ကြက်ဆင်ငှက်လဲ ပန်းကန်ထဲဝယ် သနားဖွယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန် ဆက်ရတဲ့ နေရာက ၀ါးတီးတပွဲ ဆိုပါတော့။ မိတ်ဆွေကြီး ကိုအောင်ဘု လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ကြက်ဆင်ကင်ပါ။ မစားခင် အညှော်အ၀ခံပြီးမှ စားရတဲ့ အမှတ်တရ ကြက်ဆင်မို့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
စားရတော့မည် ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံး ...
(သြော် ... ကြက်ဆင်ကလေးကတော့ ကိုယ်တုံးလုံး)
စောင့်ရကျိုးနပ်အောင်ပင် စားလို့လဲ ကောင်းပါတယ်။ အောင်ဘုရဲ့ ပထမဆုံးလက်ရာတဲ့ ... နောက်ဆုံးလက်ရာတော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူး။ နောက်နှစ်လဲ ဖိတ်ကျွေးဖို့ စကားခေါ်ခဲ့ပါတယ် ... ။ အောင်ဘုနဲ့ အိမ်သားများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၉ နာရီကျော်ပါပြီ။ အ၀တ်လဲ သိမ်းဆည်း၊ အဒေါ်တွေနဲ့ ဖုန်းပြော၊ လက်ဆောင်လေးတွေ ဖောက်ကြည့်၊ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်၊ ဘလော့မှာ တင်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ ပုံတွေရွေး upload တင် ... အားလုံးပြီးချိန်မှာ ည သန်းခေါင်ကျော်ပြီ ... အိပ်ချင်ပြီ ... ပင်ပန်းတယ် ... ဒါပေမဲ့ ပျော်တယ်။ စာမေးပွဲပြီးကတည်းက ရာသီဥတု ဆိုးလွန်းလို့ အိမ်ထဲမှာ ကုပ်နေခဲ့ရတဲ့ ကျမ ဒီနှစ်ရက်တာက စိတ်ကို relax ဖြစ်စေသလို ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် ဒါနကုသိုလ်တွေလဲ ပြုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပိုက်ဆံတပြားမှ မကုန်ဘဲ ... ကုသိုလ်လဲရ ၀မ်းလဲဝ ... အဟောဝတ ကောင်းလေစွ ... ။
၂၇၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Posted by မေဓာဝီ at 1:00 AM 15 comments
တနေ့တနေ့ သတင်းကြည့်တိုင်း မိုးလေ၀သ သတင်းကို အထူးဦးစားပေး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ နက်ဖြန် နေသာမလား၊ နှင်းကျမလား၊ အပူချိန် သုညဒီဂရီ အထက် တက်ဦးမှာလား … စသဖြင့်ပေါ့။ တခြားသတင်းတွေမှာလဲ ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရိုက်ခတ်မှုတွေကို နေ့စဉ်လိုလို တွေ့နေရတယ်။ နှင်းကြောင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေ ဖျက်လိုက်ရလို့ လေဆိပ်မှာ စုပုံနေကြတဲ့ ခရီးသည်တွေ၊ နှင်းကြောင့် ရထားတွေ မသွားနိုင်လို့ ချမ်းချမ်းစီးစီး ဘူတာမှာ စောင့်နေကြရသူတွေ၊ နှင်းကြောင့် ကားတွေ အသွားအလာခက်ပြီး ယာဉ်တိုက်မှုတွေ မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်ကြရတာတွေ … အအေးဒဏ် မခံနိုင်လို့ တိမ်းပါးသွားရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အိမ်ယာမဲ့တွေ၊ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကြ ဖျားနာကြသူတွေ … အဲဒါတွေကိုပဲ နေ့ရှိသရွေ့ မြင်နေကြားနေရတယ်။ သြော် … နှင်းရဲ့ဂယက်တွေ … ။
တောင်ဘက်ရွာက တုံးဖလားသူကြီးကတော့ မိနှင်းသို့ပေးစာဆိုပြီး စာတတန်ပေတဖွဲ့နဲ့ သူ့သဘာဝ ကျလာတဲ့ နှင်းကို ရက်စက်ယုတ်မာလှချည်ရဲ့လို့ စွပ်စွဲထားသေးတယ်။ အစကတော့ သူပဲ ဆန္ဒနှင်းဆိုပြီး မနှင်းဖြူလေး ကို တမ်းတနေသေး … ခုတော့ မိနှင်းတဲ့၊ အခေါ်အဝေါ်ကအစ မတူတော့ဘူး။ သူကြီးတို့ အပြောင်းအလဲမြန်လိုက်ပုံများ အဲဒီလို … ။
အေးလွန်းလို့ ကျမကတော့ ခိုစာ ငှက်စာ ကျွေးရုံကလွဲလို့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် မထွက်တော့ နှင်းရဲ့ဂယက်ကို မနှစ်ကလောက် သိပ်မခံစားရပါဘူး။ မနှစ်ကတော့ နှင်းရဲ့ ဂယက်ကို ဒီမှာရေးခဲ့ဖူးသလို လှလှပပ ခံစားလိုက်ရတာပေါ့။ ဒါတောင် မနှစ်တုန်းက ဒီနှစ်လောက် နှင်းမကျဘူး၊ ဒီနှစ်လောက်လဲ မအေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မနှစ်ကကျောင်းတက်တဲ့ မြို့လေးက တောင်ကုန်းလေးတွေ ဆင်ခြေလျှောတွေနဲ့ဆိုတော့ နှင်းတွေ ခဲသွားတဲ့အခါ လမ်းလျှောက်ရ သိပ်ခက်ပါတယ်။ အေးလွန်းလို့ အပြင်မထွက်ချင်ပေမဲ့ ဈေးဝယ် ကျောင်းတက် ထွက်ရသေးတာကိုး။
မနှစ်ကဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်း နှင်းတွေ အများကြီး ကျတာက ဒီနှစ် ၂၀၁၀ နှစ်ဦးပိုင်းကပါ။ ဖိုင်အဟောင်းတွေ ပြန်ရှာဖတ်ရင်း မနှစ်တုန်းက ကြုံရတဲ့ နှင်းရဲ့ဂယက်ကို ပေါက်ကရကဗျာ ရေးထားတာလေး ပြန်တွေ့လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ကဗျာကတော့ ... ကလာကဗျေး ကလေးကဗျာပေါ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
ရထား ကားနဲ့ လေယာဉ်တွေ
မော့တော့ မော့တော့ ဆိုင်ထဲမှာ
နွားနို့ ကြက်ဥ နံပြားဝယ်
(ဒါလည်း) နှင်းရဲ့ ဂယက်ပဲ … ။ … ။ :(
(နှင်းများသည်းထန်စွာ ကျသော ၂၀၁၀ နှစ်ဦးပိုင်းကရေးသည်)
Posted by မေဓာဝီ at 11:55 PM 18 comments
“အဖေ … သင်ပေါင်းရိုးရှည်ဆိုပြ …”
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေ့ကို အဲဒီလို ခဏခဏ ပူဆာခဲ့ဖူးတယ်။ “သင်ပေါင်းရိုးရှည် ရတု” အစချီတဲ့ စာဆိုစစ်သည် သီချင်းကို အဖေဆိုဆိုနေတာ ကြားပြီး သဘောကျခဲ့တယ်။ ရတုပိုင်ရှင် ဘယ်သူ၊ မူရင်းအဆိုရှင် ဘယ်သူဆိုတာ အဲဒီတုန်းကတော့ သေချာမသိခဲ့ဘူး။ အဖေ့စာအုပ်ဗီရို မွှေနှောက်ဖတ်တတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်မှ ရတုပေါင်းချုပ် စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ အဲဒီရတုလေး အမှတ်တမဲ့ ဖတ်ခဲ့ဖူးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ နတ်သျှင်နောင်လား န၀ဒေးလား ခပ်ရောရောနဲ့ မေ့သွားခဲ့ပြန်ရော။ ကျမက ရေဒီယိုသီချင်းတွေလဲ သိပ်နားထောင်လေ့ မရှိတာမို့ အဲဒီသီချင်းကို အဖေဆိုတာက လွဲပြီး ဘယ်မှာမှ မကြားဖူးခဲ့ဘူး။
ဖိုရမ်တွေထဲ ကျင်လည်ချိန်ရောက်မှ နေးတစ်မြန်မာ ဖိုရမ်ထဲကနေ မြန်မာသီချင်းကြီးတွေ တင်ပေးသလောက် အကုန် ဒေါင်းလုတ်ယူရင်း ဒီသီချင်းလေးကို ရလိုက်တယ်။ အဆိုရှင်က စန္ဒယားထွန်းညွန့် တဲ့။ အင်မတန် နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါပဲ။ အဖေ့ကို သီချင်းဆိုပြပါဆိုပြီး ပူဆာလို့ မရနိုင်တဲ့ အဖေနဲ့ အဝေးကြီးကို သွားရမယ်ဆိုတော့ ဒေါင်းလုတ်ထားတဲ့ မြန်မာသီချင်းကြီးတွေအားလုံး တပါတည်း ယူလာခဲ့ပါတယ်။ အဖေ့ကို သတိရတိုင်း အထပ်ထပ် နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေး တပုဒ် ဆိုပါတော့။
လွမ်းတိုင်း အဲဒီသီချင်းကို နားထောင်ဖြစ်ပြန်တော့ တဆင့်တက်ပြီး စာဆိုစစ်သည်ရဲ့ ရတုကိုပါ ဖတ်ချင်လာတယ်။ အဖေ့ကိုလဲ ဟိုစာအုပ် ရှာပေးပါ၊ ဒီစာအုပ် ပို့ပေးပါနဲ့ ခဏခဏ ပူဆာရတာများတော့ ထပ်ပြီး မပူဆာချင်တော့ဘူး။ (ဒါတောင် မနေ့ကပဲ ရှင်အုန်းညိုရဲ့ ဂါထာခြောက်ဆယ်ပျို့ စာအုပ်ပို့ပေးဖို့ ပူဆာထားပါသေးတယ်။) ဒါနဲ့ပဲ မြန်မာကဗျာတွေ နှံ့စပ်ပြီး စာအုပ်တွေလဲ တော်တော်စုံတဲ့ ကိုဟယ်ရီကို မေးကြည့်တော့ န၀ဒေးကြီး ရေးတဲ့ ရတုလို့ပြောပြပြီး မနှစ်ကတည်းက ကျမဆီ ပို့ပေးထားတယ်။ ကျမကလဲ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ဘလော့မှာ တင်မယ်လို့ တေးမှတ်ထားခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ နတ်တော်လပြည့် စာဆိုတော်နေ့မို့ ကျမနှစ်သက်စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ စာဆိုရှင်ရဲ့ ရတုနဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို အမှတ်တရအဖြစ် တင်လိုက်တာပါ။ ၀ါသနာပါရင် ရတုလေးဖတ်ပြီး သီချင်းလေး နားထောင်သွားကြပါအုံး။
ရတုအမှတ် (၁၁၄) ကျေးစေရတု
၁။ လျင်ကြောင်းကျိုးရည်၊ ဘက်စံရှည်၍့၊ မျိုးစည်မဝေး၊ မဟော်ကျေးနှင့်၊ ဘိုးဘေးမိဘ၊ တကွနေမှတ်၊ ငွေတောင်ထွတ်ဝယ်၊ ရံပတ်ရွေများ၊ ရွှင်ပျော်ပါး၍့၊ ဘုန်းအားနောင့်မှာ၊ ရောက်ပေလှာသည်၊ ရုပ်ဝါမြဆင်း၊ ကျေးမျာ့းမင်း ...၊ သက်နှင်းစုဝေ၊ မယ်တို့နေသည်၊ ရွှေမြေအောင်မျှို့၊ နန်းရပ်သို့လျှင်၊ ပျံတို့ချေလေး၊ မဖင့်နှေးနှင့်၊ ညီကျေးယုံနေ၊ သည်နှစ် နွေကို၊ တင်စေအကြောင်း၊ မရောက်တောင်းသည်။ ။ သင်ပေါင်းရိုးရှည် ပွင့်တကား။
၂။ သင်ပေါင်းရိုးရှည်၊ ခိုင်မြောက်စည်၍့၊ အမည်ခေါ်မှန်း၊ နိမိတ်ပန်းနှင့်၊ လန်းလန်းရောက်အောင်၊ လှထွတ်ခေါင်ကို၊ ကျေးမောင်ယူချေ၊ ဆက်ပို့လေလော့၊ ဆောင်းနွေပြန်ခါ၊ အတာနှစ်ဦး၊ လ တန်ခူးကို၊ ပိုက်ကြူးရွှေရင်၊ ရဝေခွင်ဝယ်၊ နွှဲလျှင်လမည်၊ မှာသည်ယုယ၊ ရွှေခွန်းကလည်း၊ များလှမဝေး၊ ခေါ်မေးရုံသာ၊ တောင်လက်ယာက၊ ရံကာမစ၊ ထိန်းယရွေပေါင်း၊ ခနေညောင်းသည်။ ။ ရှင်နှောင်းမျိုးမည် မြင့်တကား။
၃။ ရှင်နှောင်းမျိုးမည်၊ မြင့်လှသည်သို့၊ နေခြည်မ၀င်၊ ရောက်လေလျှင်သော်၊ သဘင်ထွတ်ကြိုက်၊ နှစ်ခြိုက်ရွှင်ပျော်၊ မယ်တော် ဘမင်း၊ သားချင်းကစ၊ ထိန်းယရံစောင်၊ လှထွတ်ခေါင်ကို၊ လက်ဆောင်ပန်းခက်၊ ကျွန်ုပ်ဆက်၍့၊ ချန်ဝှက်မထား၊ မှာသည်များကို၊ လျှောက်ကြားပေလျှင်၊ ပျံ့ရွှင်လိုလို၊ နောင့်ကိုရည်လျက်၊ လှူဘို့ဆက်သည်၊ အထက်စူဠာ၊ စွယ်လက်ယာကို၊ ရှိကြာစုံပေါင်း၊ လျင်ဆုတောင်းသည်။ ။ ကြင်ကြောင်းကျိုးသည် ခွင့်တကား။
သီချင်း (ဆို - စန္ဒယားထွန်းညွန့်)
ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ သီချင်းနဲ့ ရတုကဗျာလဲ … ။ ဒီနေ့အဖို့တော့ လပြည့်နေ့ပေမဲ့ ဥပုသ်မစောင့်ဖြစ်ဘဲ ဒီရတုနဲ့ သီချင်းကိုသာ အထပ်ထပ် ဖတ်နေမိ နားထောင်နေမိတော့တာပဲ။
ဆရာတော်မာဂဓီ (သာစည်) ရေးတဲ့ အခါတော်နေ့များ စာအုပ် ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီနေ့ကို ဓမ္မစာဆိုတော်များနေ့လို့ သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့ရပြီး အနန္တသူရိယအမတ်ကြီး ရဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာ၊ စတုရင်္ဂဗလ အမတ်ကြီး ရဲ့ လောကနီတိ၊ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ၊ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၊ တောင်ဖီလာဆရာတော်၊ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်၊ သင်္ဂဇာဆရာတော်၊ လယ်တီဆရာတော်၊ မန်လည်ဆရာတော်၊ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်နဲ့ တိပိဋကတ် ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တတို့ရဲ့ ဆုံးမစာတွေကို အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် စာဆိုပညာရှင်တွေ စာဆိုဆရာတော်တွေဟာ လောက ဓမ္မ နှစ်ဌာန အကျိုးအတွက် ရွက်ဆောင် သယ်ပိုးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မမေ့ကောင်းတဲ့ စာတွေအဖြစ် ကျန်ရစ်နေခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ သူတို့ရေးတဲ့ စာတွေနဲ့ မွေ့လျော် ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ ကျမတို့လဲ ဒီစာတွေ ပျောက်ကွယ် တိမ်ကော မသွားစေဖို့နဲ့ ဒီစာတွေကို လူအများ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားရပါအုံးမယ်။
၂၁၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀
ဤစာစုလေးဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာစာဆိုများအား လေးစားစွာ ဂါရ၀ပြုပါ၏။
Posted by မေဓာဝီ at 5:30 PM 16 comments
Labels: အခါကြီးရက်ကြီး, ရှေးကဗျာများ
မနေ့ကတင်တဲ့ ဆောင်းဘွဲ့ပို့စ်ရဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာ “ဖိုးစော်ကဲ” ကဗျာလင့်ခ်လေး ရှယ်ပေးတဲ့ ပန်ဒိုရာကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘလော့ခြင်းရဲ့ အားသာချက် အကျိုးကျေးဇူး တခုပါပဲ။ ပန်ဒိုရာပေးတဲ့ လင့်ခ်ကို သွားဖတ်ရင်း “မပူပေါင် …” ကို ထပ်ပြီး ဂူးဂလင်း လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ တခြားလင့်ခ်တွေလဲ ထွက်လာတယ်။ မူကွဲလေးတွေတော့ အနည်းအကျဉ်း ရှိတာပေါ့လေ။ ဒီထဲမှာ ကျမသဘောကျတဲ့ မူကွဲတခုကတော့ မရွှေစင်ရဲ့ ဘလော့ကပါ။ ကြယ်နီရဲ့ ကိုတံငါ ဇာတ်ဝင်ခန်းတခန်းမှာ ဒီကဗျာလေးကို တွေ့ရတယ်။
လွမ်းမပြေ မန်းမြေက တ မိပါတော့၊
အိုကွယ်... ဖျန်းလေက တသုန်သုန်။
တဲတစ်ဖက် ဆွဲဖျက်ကာ အလျင်လိုရော့သထင့်၊
ကရင်အို ယာပြင်ကြီးမှာကွယ် ...
မပူပေါင် နောက်ဆီက ချမ်းရော့သထင့်၊
ပါးမှာ ငုံပါတဲ့ နုရွှေကွမ်း။ ။
ဆေးလိပ်တို နားမှာ ထိုးပါလို့၊
တောင်ရိုးမှာ ဘာသာ သူတို့၊
ကွင်းအငူ နှင်းမြူကလဲ ကွဲချိန်မို့၊
အိုကွယ်... တဲပျက်စခန်း။ … ။
ရွတ်လို့ ဆိုလို့ အင်မတန်မှ အရသာရှိပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ဖတ်ဖူးပေမဲ့ သေချာမမှတ်မိဘူး၊ မပူပေါင် … အပိုဒ်ကတော့ အမေ သီချင်းလို ဆိုညည်းတတ်လို့ မှတ်မိနေခဲ့တာပါ။ အချုပ်တန်းဆရာဖေရေးတယ်လို့ ဒီလင့်ခ်မှာ တွေ့ပါတယ်။ ဆရာဖေက ရာသီဘွဲ့တွေ တော်တော်ရေးခဲ့တာပဲ။ မနေ့ကပို့စ်မှာ ကိုပေါ တောင်းထားတဲ့ ကဗျာလဲပဲ ဆရာဖေရေးတဲ့ ဆောင်းဘွဲ့ လေးဆစ်သဖြန်လို့ ကျမမှာရှိနေတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ခုလို တွေ့ရပါတယ်။
ခန်းဆောင်ရွှေ ရဝေတွင်းမှာလ၊ ချမ်းပေါင်လေ တဖေတင်းသော်လဲ၊ ဖြေရင်းနှင့် ခိုက်ခိုက်တုန်။
မျက်တခပ်၊ ပြက်လျှပ်ကယ် တဗီဇနာမျှ၊ ထည်အလွှာ အကုန်ထွေးသော်လဲ၊ ကြည်အသာ မလုံသေးပါဘု၊ မှိတ်ပါလျှင် လိပ်ပြာက အေးတာမို့၊ သွေးလန့်လို့ ခုန်။
ရမ်းရောင်ကာ တ-လျက် ညည်းမိတော့၊ သန်းခေါင်မှာ မြကြက်သီးရယ်က၊ တဘီးဘီး ပျံ့လို့ငယ်အုံ၊ ဗျာဆုံတဲ့ ရာသီဘဲ။
ငွေနှင်းငယ်မှုံ၊ လေညှင်းရယ် တသုန်သုန်နှင့်၊ ချမ်းပုံမှာ ကမ်းကုန်ရစ်တာမို့၊ မန်းတုန်အောင် လမ်းဆုံမှာ ဟစ်ချင်တော့၊ သည်ခေတ်မှာ သည်လိုဟာဖြင့်၊ သည်ကိုယ်မှာ သေသေလုပါပေါ့၊ ကမ္ဘာကို ဗြဟ္မာတို့ ပြုခဲ့တယ်၊ ဆောင်းရတုပွဲ။ … ။
ကြုံတုန်း ကျန်တဲ့ ဆောင်းဘွဲ့ကဗျာတွေပါ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်သူများ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်စေဖို့ပါ။ ၀ါသနာပါရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
သဉ္ဇာလီ ဗွေပြဒုမှာဖြင့်၊ ခင်သာကီ တမေစုကိုလ၊ ဖေယခု ပိုက်လှည့်ဆို။
မလုံသေးနိုင်ဘု၊ တုန်အေးရှာ တင်တမေငဲ့၊ ရင်ရွှေကို လေပြည်ခ-တယ်၊ သဲစိမ့်ကြွဖို။
တသန်းတန် ရတီဖို့သော်လဲ၊ ကြငှန်းပြန် ကတ္တီမို့မှာတော့၊ မဒီပျို့ ဆောင်းရိပ်ခိုငယ်၊ အချမ်းပိုပါလို့မှ ငိုချင်ဆဲ။
ငွေနှင်းငယ်ထန်၊ ချွေညှင်းငယ် တညံညံနှင့်၊ ရေကင်းသံ တဖန်ကြားရင်လ၊ လွမ်းအားတော် ပွေဗျာလှိုင်လို့၊ ကေညာခိုင် စုခင်လေးမှာ၊ (ကိုယ်တော်ရေ …) မှေးစက်နိုင်ဘဲ။
သနင်းဆွေ ကင်းကွေခဲ့သူမို့၊ ပြတင်းလေ နှင်းငွေသွဲ့လျှင်ဖြင့်၊ သင်းသေဟဲ့ ဆိုသလို။
တကိုယ်တည်းဟာမို့၊ ဖိုမီးလှုံလို့ ကွေးသော်လဲ၊ အေးလှလို့ငို။
စနေနံ ငွေခြင်္သေ့ရယ်နှင့်၊ ရဝေစံ မေခင်ပွေ့ပါလို့၊ ရွှေရင်ငွေ့ မတွေ့လို၊ သွေးကိုယ်ဖြင့် မရှိတောင်း။
မချင့်လေ၊ သည်ညဉ့်တာ ရှည်စေလို့၊ ဗြဟ္မာတွေ ကမ္ဘာသက်စဉ်က၊ ပြက္ခဒိန် သည်လို ရေးခဲ့တယ်၊ ဘေးသင့်တဲ့ဆောင်း။ … ။
တောင်တွင်းကြီး ဆရာကျော့ဆို ဆောင်းဘွဲ့လေးဆစ်သဖြန်
ငွေကတန် ဝေယန်ကြွမှာလ၊ ရေမတန် ဖေစံရ၊ ဟေမန္တခါမို့ကွယ်။
လေစမြုံ့ရယ်က၊ စွေတုံ့ ဝေေ၀မှုန်လို့၊ ရွှေမေရုံ တောင်မြင့်နန်းဆီက၊ ပုလဲရီ သဲဆီဖြန်းတာမို့၊ ချမ်းလိုက်လှတယ်။
ကေပွင့်ညှာ သူမဖက်တာဖြင့်၊ ရေနှင့်သာ အတူစက်သည်သို့၊ ကြူကနက် သဉ်ရိပ်လယ်၊ ဆိတ်တယ်မျှ မပျော်ဆုံး။
လက်ဦးငယ်ရင်၊ ဖက်ဖူးဆင် မေခင်ကြိုက်ကယ်နှင့်၊ ခြုံပိုက်ကာ လာမပွေ့တာဖြင့်၊ တုန်လိုက်တာ ဘမရာမွေ့မှာ၊ ချမ်းမြေ့ရေတုံး။
ရွှေမန်းက ဆရာဖေကတော့ ဆောင်းကို အပီဖွဲ့ခဲ့တာပဲ။ ရွှေမန်းက မမများဖွဲ့တဲ့ ဆောင်းဘွဲ့များလဲ ဖတ်ချင်ပါဘိတော့တယ်။ မရွှေစင်ရေ ... ခေတ်သစ် ဆောင်းဘွဲ့လေး လုပ်ပါအုံး။ ကဗျာဖြစ်ဖြစ် စကားပြေ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ကျမ ကိုးကားတဲ့ ဘုတ်အုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဆောင်းဘွဲ့တွေက မကုန်သေးဘူး၊ နည်းနည်း ကျန်ပါသေးတယ်၊ သို့သော်လဲ ဆောင်းဘွဲ့တွေ စာရိုက်ရင်း လက်ဖျားတွေအေးလာလို့ သူကြီးပေးတဲ့လင့်ခ်ထဲက လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်လို မောင်တော်ရယ် ချမ်းဆဲပါပဲ… လို့ အော်ရင်း … ဒါလောက်နဲ့ပဲ တော်ကြပါစို့။
၁၉၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀
Posted by မေဓာဝီ at 11:00 PM 8 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:32 PM7comments
မေဓာဝီတယောက် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးပါသဖြင့် ကျိတ်ပေါင်းချိန် ရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ (ဘလော့ဂါများ ဘလော့ဖတ်သူများ မျက်စိနောက်ဖို့သာ ပြင်ထားကြပေတော့) စာမေးပွဲ မဖြေဆိုခင်, ဖြေဆိုစဉ်, ဖြေဆိုပြီး အချိန်များတွင် အီးမေးလ်ဖြင့် တမျိုး, မက်ဆေ့ခ်ျဖြင့် တလီ, ဖုန်းဆက်၍တဖုံ အစုံစုံ အသွယ်သွယ် အမှန်တကယ် အားပေးကြ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သ ပေးကြသည့် ချစ်သော မိဘ, ဆွေမျိုး, မောင်နှမ, မိတ်ဆွေ, သင်္ဂဟ, သူငယ်ချင်း, အပေါင်းအသင်း, ရောင်းရင်း, ဘော်ဒါ, ဖော်သဟာ, ဘလော်ဂါများအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
မြို့မိမြို့ဖများ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် ဒီတခါ စာမေးပွဲကို ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမကလဲ နည်းနည်းတော့ လွန်သလားမသိဘူး။ ကျမ စာမေးပွဲဖြေတာကို မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ အမေနဲ့ အဖေလဲ မနေရ၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ မောင်နှမတွေလဲ မနေရ၊ ဘုန်းကြီးရော သီလရှင်ပါမကျန် ကျမအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။ မန္တလေးက အရီးလေး စည်းစိမ်တောင် ဘုရားကြီးသွားပြီး ရွှေဆိုင်းကပ် ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ မက်ဆေ့ခ်ျပို့လာပါတယ်။ (ကျေးဇူးပါ အရီးလေး) စာမေးပွဲခန်းထဲ မ၀င်ခင် မိနစ်ပိုင်း အလိုမှာ ဖတ်ရတဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျတွေ၊ စာမေးပွဲပြီးပြီးချင်း ဖတ်ရတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကလဲ စိတ်ခွန်အားကို ဖြစ်စေပါတယ်။
စိတ်ခွန်အားက ကျမအတွက် တကယ်ကို အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ ကျမစိတ်က တက်လွယ် ကျလွယ်။ တက်ရင်လဲ လိုက်ဖမ်းလို့ကို မမီနိုင်သလို ကျပြီဟေ့ဆိုလဲ ကုန်းကောက်စရာ မရှိတော့ဘူး၊ ဟိုးအောက်ဆုံး ဒုတ်ဒုတ်ထိ။ ပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာမှာ ဖြေရတဲ့ စာမေးပွဲက ဇွန်စာမေးပွဲထက် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုပြီးများစေတယ်။ ရာသီက အေးစက်စက်၊ မနက်ဆို နေက တော်တော်နဲ့မထွက်၊ ညနေဆို ၃ နာရီ ၄ နာရီလောက်မှာ မှောင်နေပြီ။ အေးစက်စက် ညနက်နက်မှာ တယောက်ထဲ စာဖတ်ရတာ အင်မတန်မှ ငြီးငွေ့စရာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ စာမေးပွဲမဖြေခင် ၃ ပတ်လောက် အလိုမှာ ဦးရီးတော်က ဟောလီးဒေးဆိုပြီး ဆွေမျိုးအုပ်စုတောင့်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ကို လည်လည်သွားတော့ ကျမတယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ရိက္ခာအပြည့်အစုံနဲ့ တအိမ်လုံးမှာ ဘုန်းမေတယောက်ထဲ only the lonely ဖြစ်နေတာ သနားစဖွယ်ကလေးပေါ့။
စာတွေက များ ဖတ်လို့ မနိုင်၊ ဖတ်လိုက် မေ့လိုက်၊ သဘောမပေါက်လို့ လုံးချာလည်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတော့ နောက်ဆို စာကိုနှစ်စကတည်းက သေချာဖတ်ပါတော့မယ် ပေါ့တီးပေါ့ဆ မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ နောင်တတွေရလိုရ …
တခါတခါတော့လဲ … ငါဘာလို့ ဒါတွေ ပင်ပန်းခံ လုပ်နေရတာလဲ၊ ငါနဲ့ မကျွမ်းကျင်တာတွေ မအပ်စပ်တာတွေ လုပ်နေရလို့ သိပ်ခက်ခဲနေတာ … ဒီစာမေးပွဲအောင်တော့ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှ ဘာကို မျှော်လင့်ရအုံးမှာလဲ စသဖြင့် တွေးရင်း ဒေါသတွေထွက် ၀မ်းနည်းလိုနည်း … ။ တယောက်ထဲဆိုတော့ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ စိတ်က ဂနာမငြိမ်ဘူး။ စိတ်တိုတိုင်း ၀မ်းနည်းတိုင်း စိတ်အားငယ်တိုင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ဂျီကျလို့ရမယ့်သူ မှန်သမျှကို နားဒုက္ခပေးခဲ့မိသေးတယ်။
ဒီနှစ်မှ ရာသီဥတုကလဲ အေးလိုက်ပုံ ဆိုးလိုက်ပုံများ … ကိုယ်ကဆိုးတော့ ရာသီဥတုကပါ လိုက်ဆိုးပေးရတာ ထင်ပါ့။ အနှစ် ၃၀ အတွင်းမှာ အဆိုးဆုံးတဲ့။ ကျမနေတဲ့ Midland မှာတောင် အနုတ် ၁၂၊ ၁၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ ဖြစ်တာ … ဒီရောက်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်းလဲ ခုလောက်ထိ အေးတာ ကြုံဖူးဘူး။ နှင်းကလဲ နိုဝင်ဘာလ မကုန်ခင်ကတည်းက ကျတဲ့နှင်း။ ကိုယ့်အပူနဲ့ ကိုယ်မို့ နှင်းကိုလဲ ရင်မခုန်အားဘူး။ ဖြူဖြူလွလွ နှင်းဖွေးဖွေးလေးတွေကို အရင်က ဘယ်လိုပဲ ချစ်ခဲ့လဲ သွားရခက် လာရခက်မို့ တဖြည်းဖြည်း မုန်းလာတယ်။
အန်တီတယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောတော့ ကျမက စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောမိတယ်။
“အန်တီရေ … ငရဲဆိုတာ အပူချည်းပဲ ရှိတာမဟုတ်ဘူး … အအေးငရဲလဲ ရှိတယ် … အခု ဒီမှာ အအေးငရဲခံနေရတာလေ” ဆိုတော့ သူက ရယ်လိုက်တာ … ။ ပြီးတော့ သူကမေးတယ် … အအေးငရဲက ဘာငရဲလဲဟင် … တဲ့။ ဒီတော့မှ ကျမလဲ တိန်တော့တာပဲ။ သိမှ မသိဘဲကိုး။ “ငရဲနာမည်တော့ မသိဘူးအန်တီ … ဟီးးး” လို့ အရှက်ပြေရယ်ပြီး စကားလွှဲလိုက်ရတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်တိုင်လဲ အအေးငရဲ နာမည်ကို သိထားချင်တာနဲ့ ကိုယ့်ထက် နားလည်တတ်ကျွမ်းပြီး ပညာစုံသူကြီး ကို မေးကြည့်တော့ သူက မသိဘူး … လို့သာ ဘူးခံပါတယ်၊ ပြောမပြပါဘူး။ မသိတာတော့ မဖြစ်နိုင် ဒါ ပညာလျှိုတာပဲ နေမှာလို့ တွေးမိတယ်။ ပြောမပြလဲ နေပေါ့၊ ကျမမှာ အားကိုးရတဲ့ အဘိဓာန်ရှိပါတယ်။ စာမေးပွဲပြီးသည်ထိ ခဏလေးအောင့်ထားပြီး စာမေးပွဲပြီး နောက်တရက် (ဒီကနေ့ မနက်) မှာ အဘိဓာန်ကြီးကို လှန်ရပါတော့တယ်။
ကျမ အဘိဓာန်က စာအုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။ လူ အဘိဓာန်ပါ။ ထိုသူကတော့ ကျမ မွေးသဖခင်ကြီးပါပဲ။ အဲ လှန်တယ်ဆိုလို့ တလွဲမထင်ပါနဲ့အုံး။ အဖေ့ဦးနှောက်ထဲမှာ သိုမှီးထားသမျှတွေ လှန်လှောမေးမြန်းတာကို ဆိုလိုခြင်းပါ။ အအေးငရဲကိစ္စ အဖေ့ကို မေးတော့ အဖေက ချက်ချင်းပဲ ခုလိုရှင်းပြတယ်။
“အအေးငရဲဆိုတာ လောကန္တရိတ် ငရဲ … သမီးရဲ့။ သူက ဘယ်နားမှာရှိလဲ ဆိုတော့ … သမီး စက်ဝိုင်း ၃ ခုကို ကပ်ပြီးဆွဲလိုက်ရင် အားလုံးဆုံတဲ့နေရာမှာ အပေါက်ကြီး ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ လောကန္တရိတ် ငရဲဆိုတာ အဲဒီလိုပဲ စကြာဝဠာကြီး သုံးခု ဆုံတဲ့နေရာမှာ တည်နေတာ။ မှောင်မည်းပြီး အေးစက်နေတာပဲ။ အဲဒီမှာ ငရဲခံနေရတဲ့သူတွေက စကြာဝဠာတံတိုင်းကို လက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ထားရတယ်၊ လက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ပြုတ်ကျသွားပြီး အမှုန်အမွှား ဖြစ်သွားရော …”
အဲဒီလို အားကိုးရတဲ့ ကျမရဲ့ အဖေပါ။ အဖေပြောနေတုန်း ကျမက လောကန္တရိတ်ကို googling လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ခုလို ထွက်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျမက ထပ်မေးတယ်။
“အဖေ အဲဒါ အဇာတသတ်ကျတဲ့ ငရဲလား”
“မဟုတ်ဘူး၊ အဇာတသတ်ကျတဲ့ ငရဲက လောဟကုမ္ဘီ တဲ့”
“ဟင် … ဒါပေမဲ့ သမီး အင်တာနက်မှာရှာတာ လောကန္တရိတ်က အဇာတသတ်ကျတဲ့ ငရဲလို့ ရေးထားတယ် အဖေရ”
“မဟုတ်ဘူး သမီးရဲ့ … အဇာတသတ်ကျတဲ့ ငရဲက ဒီစကြာဝဠာထဲက ငရဲ၊ လောကန္တရိတ်က စကြာဝဠာအပြင်က … …”
အဖေဆက်ရှင်းပြနေတုန်း လောဟကုမ္ဘီကို ထပ်ပြီး ဂူးဂလင်း ပြန်တယ်။
“လောဟကုမ္ဘီက ဒု သ န သော သူဌေးသားလေးယောက် ကျတဲ့ ငရဲဆို … အဇာတသတ်နဲ့ တူတူပဲ ဟုတ်လို့လား အဖေ”
မေးနေရင်းနဲ့ပဲ အဖြေကိုတွေ့သွားတယ်။ အဖေပြောတာ မှန်ပါတယ်၊ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ ကျမရဲ့ အဘိဓာန် ကြီးလဲ နော်။
“ဟုတ်တယ် … အဖေ … သမီးတွေ့ပြီ၊ အဖေပြောတာ ဟုတ်တယ်”
“အဖေ့ကို ယုံပြီလား သမီး …”
“အဖေ့ကို မယုံတာ မဟုတ်ဘူး … အင်တာနက်က အင်ဖိုတွေ ဘယ်လောက်မှန်လဲ မမှန်လဲ သိချင်တာ ခုဆို အမှားကြီးရေးထားတာ တန်းတွေ့တာပဲ၊ အင်တာနက်က အချက်အလက်တိုင်း ယုံကြည်လို့ မရဘူးပေါ့ အဖေရာ”
“အဲလို အမှားတွေရေးတာ ဘယ်သူမှ မပြင်ပေးကြဘူးလား”
“များသောအားဖြင့်တော့ မပြင်ကြပါဘူး၊ မသိတဲ့သူက များတာကိုး … သိတဲ့သူကတော့လဲ ဖတ်ဖြစ်အုံးမှလေ၊ ဖတ်ဖြစ်တော့လဲ အရေးလုပ်ပြီး ပြောချင်အုံးမှ၊ ပြောတာကိုလဲ မှားတဲ့သူက လက်ခံပြီး ပြင်ချင်အုံးမှ … ဆိုတော့ တချို့ကလဲ အလုပ်ရှုပ်ခံ အမုန်းခံပြီး ပြင်ပေးမနေတော့ဘူး … တလောကဆို ဗေဒါလမ်းကို မင်းသုဝဏ် ရေးတဲ့ ကဗျာလို့ ရေးထားတာ တနေရာမှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ အဲဒီလောက်တောင် မသိတာမျိုးကျတော့ အသည်းယားတယ် အဖေရာ”
“အဲဒါကတော့ စာပေနှံ့စပ်တဲ့သူမဟုတ်လို့ နေမှာပေါ့၊ ဒါမျိုးမှားတာကမှ တော်ပါသေးတယ်၊ ဘာသာရေးမှာ အမှားတွေရေးပြီး အမှားတွေ ယုံကြည်မိကြပြီဆိုရင်တော့ ပြင်ရခက်တယ် သမီးရဲ့”
“ဟုတ်တယ်နော် … ဒါပေမဲ့လဲ … မှားတဲ့သူကလဲ မှား၊ ယုံတဲ့သူကလဲ ယုံနေကြတာပါပဲ အဖေရယ်… သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်နေတာပဲကိုး”
အဖေနဲ့ စကားပြောပြီး လောကန္တရိတ် ငရဲအကြောင်း ကျမတွေးနေမိတယ်။ တကယ်ပါပဲ ကျမရောက်နေတာ ဘိလပ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား လောကန္တရိတ်ငရဲများလား လို့ပေါ့။ ဒီလောက် အေးစက် မှောင်မိုက်တဲ့နေရာကို ဘယ်လို အကုသိုလ်နဲ့များ ရောက်လာခဲ့ရတာပါလိမ့် … အမေကတော့ ညည်းကို ကောင်းစေချင်လို့ နတ်ပြည်တင်ပေးတာ ဆိုပဲ … ဧကန္တ အမေတော့ ကျမကို နတ်ပြည်နဲ့ လောကန္တရိတ် မှားပို့လိုက်မိတယ် ထင်ပါ့။ နတ်ပြည်ကနေဆို လူ့ပြည်ပြန်ဆင်းချင်ရင် အလွယ်လေးပေမဲ့ လောကန္တရိတ်ကနေ လူ့ပြည်ပြန်သွားဖို့ရာ အခက်သား မဟုတ်လား။ ကြည့်လေ … အခု ကျိတ်ပေါင်း = ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာလဲ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်ဌာနေ ကိုယ် အသီးသီး အသက ပြန်ကြပေမဲ့ မေဓာဝီခမျာမှာ ပြန်ခွင့်မရရှာပါဘူး။
“ကျောင်းက ၃ လတောင် ပိတ်မှာ အမေ … အိမ်မှာ အမကြီးကလဲ မရှိတော့ အမေနဲ့ အဖေ နှစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာ … အိမ်က အလုပ်ထဲမှာ သမီးလာလုပ်ပေးမယ်လေ …” လို့ အားတက်သရော ပြောပေမဲ့ မွေးသမိခင်ကြီးက ပြန်မလာရ တချက်လွှတ် အမိန့်နဲ့ အိမ်ဝင်ခွင့် ဗီဇာပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ စိတ်မလျှော့ဘဲ နောက်တမျိုး လှည့်ပြောကြည့်သေးတယ်။ “ဒါဆိုလဲ စာမေးပွဲအပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဆိုသလို အမကြီးနဲ့ မောင်လေးရှိနေတဲ့ ဖလော်ရီဒါ အလည်သွားမယ်လေ … စပွန်ဆာ ဘယ်သူလုပ်မလဲ” ဆိုတော့ တယောက်မှ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ကြဘူး။ ရက်စက်လိုက်ကြပါဘိ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မေဓာဝီတယောက် ကျိတ်ပေါင်းချိန်မှာ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဘိလပ်မြေမှာပဲ လောကန္တရိတ်ငရဲရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ ခံစားပြီး ဘယ်မှ မသွားရ မလာရ စကြာဝဠာတံတိုင်းနဲ့တူသော ဦးရီးတော် အိမ်ကို ကုတ်ကပ်တွယ်ထားရပါအုံးမယ်။ လက်လွှတ်ချလိုက်ရင်လဲ အမှုန့်ဖြစ်သွားမှာစိုးရတယ် မဟုတ်လား။
သြော် … ဘွ ဘွ ဘွ … ဆိုးလှပါတကား …. ။
၁၅၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
ပြင်ဆင်ချက်။ ... ။ လောကန္တရိတ် .. ဟု "တ"-သတ် ထားသည့် နေရာများကို လောကန္တရိက် ဟု "က"-သတ်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်။ (သတ်ပုံ အမှန်ကို ကွန်မန့်ထဲတွင် ရေးထည့်ပေးသွားသည့် ကိုနတ္ထိကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
Posted by မေဓာဝီ at 11:30 PM 21 comments